ဆင်ဆာဌာန ခွဲခြားဆက်ဆံဟု ဆုရွှန်းလဲ့ပြော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဆင်ဆာဌာန ခွဲခြားဆက်ဆံဟု ဆုရွှန်းလဲ့ပြော
ဆင်ဆာဌာန ခွဲခြားဆက်ဆံဟု ဆုရွှန်းလဲ့ပြော
Posted by True Faith on Jul 9, 2010 in Myanma News | 8 comments
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ စာပေစိစစ်ရေးအနေဖြင့် ဆင်ဆာဖြတ်ရာတွင်ပင် ခွဲခြားမှုများရှိနေကြောင်း လုံခြုံအောင် ဝတ်စားထားခြင်းမရှိသော ဓာတ်ပုံတခုကြောင့် စာစောင်ထုတ်ဝေမှု တပတ်ရပ်နားခံမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဆုရွန်းလဲ့က တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ကြာသာပတေးနေ့ အပတ်စဉ်ထုတ် အင်ဗွိုင်းဂျာနယ်အတွင်းပိုင်း၌ ဆုရွှန်းလဲ့၏ အင်တာဗျူးကို ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြထားရာတွင် သရုပ်ဆောင်မှာ စကပ်ဝတ်ထားသဖြင့် ပေါင်ပေါ်နေသည်ကို စာပေစိစစ်ရေးက ” မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မကိုက်ညီ” ဟုဆိုကာ အပြစ်ပေးသောအနေဖြင့် ဂျာနယ်ကို နောက်တပတ်ရပ်နားရန် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ စာပေစိစစ်ရေးဌာနက ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ဆုရွှန်းလဲ့
“ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ကို ပေါ်လည်း မပေါ်ဘဲနဲ့ ပိတ်တယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ လူကြီးတွေ မျက်စိရှန်း လို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ သူများတွေ ပေါင်လောက်တောင် ရိုက်နေကြတဲ့ကိစ္စ။ တချို့တွေ ဖင်အုပ်ရုံလောက် ဖော်ပြီးတော့ ရိုက်ထားတဲ့ ဂျာနယ်တွေလည်း ရှိတာဘဲ။ အဲဒါကြတော့ ဘာလို့ ဆင်ဆာပေးကြလဲ။” ဟု ဆုရွှန်းလဲ့က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အလားတူပင် ယခု ၅ ရက်နေ့ထုတ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးတွင်လည်း အိန္ဒြာကျော်ဇင်နှင့် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့၏ စကပ်တိုဖြင့် ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများ ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် ထုတ်ဝေခွင့် တပတ်ပိတ်လိုက်ကြောင်း ပြည်တွင်းအယ်ဒီတာ တဦးက ပြောသည်။
ဂျာနယ်နှစ်စောင်လုံးမှ ဓာတ်ပုံများသည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း စာပေစိစစ်ရေးက ပြောသည်ဟု သူက ပြောသည်။
ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စာပေစိစစ်ဌာန ညွန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေက အနုပညာ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေသူ ၃ဝ ဦးခန့်ကို သရုပ်ဆောင်များ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့သေးကြောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
“ဂျာနယ်တွေ ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာ မဂ္ဂဇင်းတွေ အနေနဲ့လည်း အမျိုးသမီးပုံတွေကို အဲဒီလိုမဖြစ်ဖို့။ ဖြစ်ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တခါတည်း ပိတ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် တလ၊ နှစ်လနားဖို့ အရေးယူမယ်လို့ ညွန်ကြားရေးမှူးက ပြောတယ်” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဆိုပါ ပိတ်ခံရသည့် ဂျာနယ်တိုက်များသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း တာဝန်ရှိများက ဖြေဆိုခွင့် မရှိဟုဆိုကာ ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ယခင်က အနုပညာမဂ္ဂဇင်းများတွင် လုံလုံခြုံခြုံ မရှိသော ဓါတ်ပုံများကို ဖော်ပြပါက ခေါ်ယူသတိပေးလက်မှတ် ထိုးခိုင်းခဲ့သော်လည်း ဂျာနယ်ပိတ်သည့်အထိ အရေးယူခြင်းမှာ ယခုအကြိမ်သည် ပထမဆုံး ဖြစ်သည်။
ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်နားလိုက်ရသဖြင့် ဂျာနယ်ပုံနှိပ်ခအတွက် မကုန်သော်လည်း တပတ်အတွင်း ကြော်ငြာ ဝင်ငွေများ ဆုံးရှုံးသွားဖွယ်ရှိသည်။
ခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ ဂျာနယ်နဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေကြောင့်လူငယ်တွေအတုယူမှားကုန်တာလေ ။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကိုတိုတတ်လာတယ်နော် ။ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းဆိုလည်း တခြားနိုင်ငံရောက်တာနဲ့ ၀တ်လိုက်တာပဲ ။
မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် တွေးယူနေကြရပြီ။
အဆိုးဆုံး ကတော့ စကပ်တိုဝတ်ပြီး လိုင်းကားစီးနေကြတာပါ။
သင်ဘယ်ခေတ်ကို ရောက်နေပြီလည်း ? သူများတွေကို ဝေဖန်ရအောင် ကိုယ်ကိုတိုင်ရော အဲ့လိုနေထိုင်ကျင့်ကြံကြပါရဲ့လား
မဟုတ်ဘူ:ဗျ ဆုရွန်းလ ပြောတာက တမျိုး
i can show and display which journals are show and display.
but.,should be fair play.
သူဆိုလိုတာ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ.. အတိုအပြတ်ဆိုတာ သတိထားပြီးကို ဆင်ဆာ ဖြတ်သင့်တယ် အရင်က မြန်မာအသံက တော်ယုံဆိုတာနဲ့ ဆင်ဆာဖြတ်ပစ်တာ သူလည်း အခု ကြည့်ကောင်းနေလားမသိဘူး မနက်မနက် လာတဲ့ နေဗီယာ လိုးရှင်း ကြော်ညာမှာ နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီး အတိုလေးနဲ့ နံ့နေတာ ပြီးတော့ ပြောတော့ပါဘူး
ပြောလက်စနဲ့ ကျန်သေးတာ ထပ်ပြောလိုက်အုန်းမယ် ကြည့်မရတာ။ မြန်မာအသံ တိုးချဲ့ လိုင်းတွေ 5moive ယူထားတဲ့ သူတွေ မှ ကြည့်လို့ရတဲ့ အလကားအစမ်းလွင့်နေတဲ့ For info အဲဒီလိုင်းမှာ စကားပြောတဲ့ ကောင်မလေး အ၀တ်အစားကို လုံးဝ ကြည့်မရဘူး အရှေ့က သရေခံက ရှည်လွန်းလို့ အောက်က ရှက်ရှက်အထိဖုန်းပြီးတော့ ရှက်ရှက်ဖုန်းထားတဲ့ စကတ်က တိုတိုလေး အောက်ကတော့ ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ထားပါတယ် အတိုက ကိုရီးယား ဆွဲသားတွေ ကျပ်ထုတ်နေတာ လုံးဝ ကြည့်လို့မကောင်းဘူး ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ရိုက်ထားသင့်တာ ခဏခဏ တပတ်လည်ပြီး တနေ့ အနဲဆုံး ၄ကြိမ်လောက်ပြနေတာ။